မောင်မှိုင်းလွင်(အင်းဝ) – တိုက်စစ်မှူး | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်မှိုင်းလွင်(အင်းဝ) – တိုက်စစ်မှူး
Illustration – KT#
(မိုးမခ) အောက်တုိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆
ဝင်တာ မဝင်တာ အပထား
ဘောလုံးက လာမတိုး။ ။
၁ ၃ . ၁ ၀ . ၂ ၀ ၁ ၆